Jarmalka koorsada Titanic: markasta sax oo had iyo jeer qaldan
Nazi ka soo horjeedda
Had iyo jeer sax iyo marwalba khalad
Manifesto ee AfD
Jahwareer Nazi iyo cunsuriyad ah ayaa ka jira Jarmalka - ruuxa AfD. Dhammaan dhinacyada Jarmalka iftiimay waxay isku baheysteen ugaarsiga dadban ee ka dhanka ah daawade -yahankan, kaniisadaha, ururada, siyaasiyiinta, warbaahinta, isboortiga, sayniska, fannaaniinta nooc kasta, warshadaha iyo dhaqaalaha, marka la soo gaabiyo: dhammaan gobolka iyo awoodaha aan dawliga ahayn.
of Alexander Brandenburg, kahor 17 saacadood 12 saacadood
Bal eeg Jarmalka
Haddii aad leedahay geesinimo aad u adeegsato fahamkaaga, waxay leedahay cawaaqib: waad saxantahay! Waxaad tahay Naasi! Marka loo eego kala qaybsanaanta siyaasadeed ee midig, bidix iyo mid xor ah, bilowgii qarnigii 19aad mid uun Sii wad akhriska…
of Alexander Brandenburg, kahor 1 toddobaad 12 saacadood
Qeybinta iyo midnimada Jarmalka
Dadku ma aamuseen? Waxay umuuqataa inaysan jirin mucaarad awood leh siyaasadan qaladka ah oo aan lagahadlin. Laakiin kaliya haddii aad rumaysan tahay, sida taliyayaasha waaweyn iyo kuwa yaryarba, in dhammaan fikradaha male-awaalka ahi ay noqdaan xaqiiqo inta ay nool yihiin, ayaa sidaas u fikiri doonta. Waxaa jira horumar dhulka hoostiisa ah oo bulshada ka mid ah oo gaaban, laakiin inta badan soconaya muddo dheer. Isbedelada waaweyn waxay u baahan yihiin koritaan dheer.
of Alexander Brandenburg, kahor 2 bilood 12 saacadood
Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee dhamaadka adduunka
Farsamooyinka musuqmaasuqa iyo waji-ka-yeelidda wejiga iyo baabi'inta xuquuqaha aasaasiga ah waxaa loogu talagalay inay noo diyaariyaan inaan u adkaysanno dowlad cusub oo Orwell ah oo aan waxba ka aqoon dimuqraadiyadda, sharciga iyo xorriyadda, laakiin waxay taageertaa isbeddelka cimilada isbedbeddeli kara oo la maareyn karaa iyada oo ah aalad lagu sii wado dulmiga! Mar labaad, waqtiyo cajiiba ayaa ina sugaya!
of Alexander Brandenburg, kahor 4 bilood 12 saacadood
Aragtida adduunka ee Hantiwadaagga Qaranka iyo aragtida cagaaran ee adduunka ayaan u kala fogayn sida qofku u malayn karo. Badanaa arrimaha aan xalka loo helin waxay ku soo ifbaxaan nacaybka cagaaran ee Jarmalka. Waxaa jira dhowr qodob oo isku xirnaan iyo iskumid ah: Habka ugu fiican ee daahirnimada ayaa isku xira labada aragtiyood. Wax walba waa inay had iyo jeer Sii wad akhriska…
of Alexander Brandenburg, kahor 2 sano 17 saacadood
AfD iyo dib u soo nooleynta dimuqraadiyadda
Xisbiga AfD, oo wali siyaasad ahaan lagu ciqaabayo ilaa maantadan la joogo, wuxuu horeyba u qabtay adeegyo waawayn oo aan laga soo kaban karin oo loogu talagalay soo noolaynta dimoqraadiyada Sharciga Aasaasiga ah iyo dooda siyaasadeed ee xorriyadda dadweynaha: Soo-gaadhista joogtada ah ee bidix-cagaaran iyo cagaar-siyaasadeed oo ay si wada jir ah ugu faafiyeen warbaahinta dowladda iyo xisbiyada Merkel Sii wad akhriska…
of Alexander Brandenburg, kahor 2 sano 12 saacadood
Borobagaandada (cimilada) carruurta
Haa - labiska caruurtu wuxuu ku soo noqday qaabkiisi. Barbaarintu kuma filna in ay ka dhasho nin ama naag dumar adeecsan, noocyo cusub oo badan oo luqado iyo adeec ah.
of Alexander Brandenburg, kahor 2 sano 16 saacadood
Waalidka tallaalka ayaa qabta carruurta
Istaraatijiyadda tallaalka ee ay dawladdu u waddo carruurta iyo dhallinyarada iyo u-haynta waalidka ayaa qayb ka ah dadaallada cagaar-bidix ah ee lagu kala dirayo qoyska shaqadii iyo hawshii hore iyo in carruurta laga ilaaliyo gacmaha waalidka (guurka dhammaan / barnaamijka Jinsiga / siyaasadda dadka laga tirada badan yahay).
of Alexander Brandenburg, kahor 1 bishii 1 bishii
Ku socota dadka aan la tallaalin
Ha cabsanina. Waxaad muujisaa adkaysi, daacadnimo, iyo go'aan. Waxaad ku soo ururin doontaa bulshooyinkaaga, waxaad samayn doontaa qorshayaal midba midka kale ku caawinayo, oo wuxuu u doodi doonaa isla xisaabtanka sayniska iyo xorriyatul qowlka oo lagama maarmaanka u ah inay bulshadu barato.
Nolol maalmeedka ayaa iftiimiya: Taliyayaashu waxay leeyihiin mutadawiciin. Mar walba ma aha inay noqoto bilayska oo qaada tallaabo geesinimo leh. Waxaa la dhihi jiray Blockwart!
of Alexander Brandenburg, kahor 2 bilood 1 bishii
Annagu ma nihin AfD, laakiin dabcan waan ku dhownahay xukunkiisa. Anigana xisbi ahaan, waxaan si cad u taageerayaa xaqiiqda ah inaan u codeeyo xisbiga AfD, maxaa yeelay waxay u taagan tahay kuna dhaqmeysaa iyadoo lagu saleynayo Sharciga Aasaasiga ah. Haddii kale anigu uma codeyn doono iyaga sidoo kale madax uma noqon doono aasaaskan. AfD wuxuu dacwoodayaa talaabooyinka hada socda ee ilaalinta dastuurka sabab macquul ah. Qaabka loogu qiimeeyo xirfad ahaan, dowladda federaalku way ku dhici doontaa ka dib sannado geedi socod ah. Waana wax fiican!
of Alexander Brandenburg, kahor 2 bilood 2 bilood
Haweenka ku jira ciyaaraha ragga iyo kuwa kale
Waxay noqon laheyd caqli gal in loo qaato isku dhac ku soo dhex gala haweenka oo gala aagga ragga - gaar ahaan inta lagu guda jiro horyaal Yurub ah. Maya - waa mashruuc dib-u-waxbarasho oo siyaasadeed. Waa inaan ula qabsano xaqiiqda ah in haweenku rag yihiin ragguna dumar yihiin. Wax walba waa suurtagal mana jiro jinsi gaar ah. Jinsi ama lab ama dhedig midwalba waxkastoo wanaag ah ama xun ayuu sameyn karaa.
GDR sadarka suufka ayaa baabi'iya dimuqraadiyadda GG
Xisbiyada mideysan ee mr Merkel ma yaqaanaan duruuf, meel bilaw, aasaas iyo keydyo ubaahan in la ilaaliyo lana sugo. Kaliya ujeedoyinka wanaagsan, himilooyinka iyo riyada ayaa tilmaamaya wadada loo maro mustaqbal xaasid ah oo kuhaboon dadka iyo quruumaha oo dhan iyo xaqiiqooyinka dabiiciga ah iyo kuwa bayoolojiga ah. Mar labaad, utopia waxay u dabaaldegaysaa dib uga soo noolaanshaha burburka qofkii ka horyimaadana wuxuu si aan gabbasho lahayn ugu dhex nasan doonaa orcus-ka.
Waa maxay isbedelka aan ka hadlayno?
Cimilada Jarmalka way kasii daraysaa marba marka ka dambeysa. Ma aha oo kaliya waxa loogu yeero cimilada dadku sameeyay ee kicisa fiiro iyo dhaqdhaqaaq badan. Laakiin sidoo kale jawiga bulshada ee runtii dadku abuuray. Ku celcelinta Würzburg waxay mar kale na xasuusisay xaaladda cimilada dalka.
of Alexander Brandenburg, kahor 3 bilood 2 bilood
Fiiro gaar ah: Tarjumida boggan ayaa otomaatig ah waxaana laga yaabaa inay ku dhacdo khaladaad yar yar oo ku saabsan aqoon-isweydaarsiga ama weedho wadareed.
Cartel of cadaab
Caruurta iyo reerka
soo jireen Kaniisadaha
loo yaqaan 'fabula docet'
kan iyo kan
Xuquuqda daabacaadda 2019 | Jarmalka koorsada Titanic